Isu leMartingale - UK 2021 ✅
Home » Imidlalo Yekhasino » I-Roulette » Isu leMartingale
Isu leMartingale leRoulette
Lwaqala Kanjani Uhlelo Lokubheja LweMartingale
Nakhu ukuthi Ungalidlala Kanjani Iqhinga leMartingale Roulette
Zimbalwa Izinto Okufanele Uzikhumbule Ngohlelo lweMartingale eRoulette
Wonke umuntu ufuna ukushaya i-jackpot, futhi kuyiqiniso ngabadlali be-roulette abadlala kumakhasino aku-inthanethi. Ngama-jackpots athenjisiwe afinyelela ezinkulungwaneni ezimbalwa kuya kumakhulu ezinkulungwane kunoma iyiphi imali enikeziwe nomehluko wokuqokwa njengomnqobi, abadlali abaningi bazama zonke izindlela ukuze babikezele umphumela womdlalo.
Ukwandisa amathuba abo okuwina, abadlali abaningi be-roulette basebenzise izindlela ezithile zokudlala nokubheja. Futhi elinye lamasu athandwayo yiMartingale Roulette Strategy, uhlobo oludumile lwecebo lokubheja. Ngaphambi kokuba sixoxe ngemithetho nezinyathelo zokwamukela isu, kungcono sibheke imvelaphi yegama necebo.
Kukhona ezinye izindaba ezitholakala ku-inthanethi ezilandelela umsuka waleli su le-roulette. Inkolelo evamile ukuthi uhlelo lwaqala futhi lwathandwa ngo-18 th – iFrance leminyaka. Ezinye izindaba zazicacile, zikhomba umuntu ogama lakhe linguHenry Martindale, umnikazi wekhasino eLondon ngesikhathi sama-1700s, owadumisa uhlelo. Ngenkathi izindaba ziyahlukahluka, akunakuphikwa ukuthi uhlelo manje seluyisu le-roulette elisungulwe elidlalwa ngabathandi be-roulette ezingxenyeni eziningi zomhlaba.
Awudingi ukuba ngumpetha wezinombolo ozodlala futhi uwine kuleli qhinga le-roulette. Umgomo oyisisekelo wohlelo lweMartingale ulula: njalo uma uhlulwa ukubheja, umane ukuphinda kabili ukubheja kwakho okulandelayo!
Kepha ngaphambi kokuthi uqale ukudlala leli qhinga, udinga ukugcina engqondweni iphuzu elilodwa elibucayi. Kusu leMartingale, ungaqeda ukuwina ngokudlala amaseshini amafushane. Uzoba nethuba elingcono lokuwina, kepha ukunqoba kuvame ukuba kuncane. Futhi ngezikhathi ezingavamile ukubheja kwakho okuzolahleka, ukulahlekelwa kukhulu. Kusengukuhweba, kepha ngokuwina okuncane ngemuva kweseshini ngayinye.
Ukufakazela lesi simiso nasi isibonelo esiyisisekelo: Ubheja amayunithi ama-4 okubheja. Yisho ngokwesibonelo ukuthi uwina umdlalo olandelayo, bese ubeka amanye amayunithi amane okubheja. Kepha ekudlaleni okulandelayo kwedayisi, ulahlekelwa ngakho ngokuya ngemithetho; ukubheja kabili kumayunithi okubheja ayi-8. Ekuphonseni okulandelayo kwedayisi, ulahlekelwa futhi ugcine ukubheja amayunithi okubheja ayi-16. Njengokungathi izinto ngeke zisaba zimbi kakhulu, ugcina uhluliwe futhi, okusho ukuthi uzobeka amayunithi angama-32 ekubhejeni emdlalweni olandelayo. Futhi ngaphambi kokuthi uqale uthi ngiyaxolisa ngokubheja kwakho okumpofu, ekugcineni uthole ukuwina!
Kulolu chungechunge lwezinto zokubheja ozenzile, ukwazile ukuthola inetha lamayunithi wokubheja ama-4. Futhi njengoba uqoqe amayunithi ama-4 okubheja ngaphambi kokuqala kochungechunge lokulahlekelwa, lokhu kuhumushela enanini eliphelele lamayunithi okubheja ayi-8. Lokhu kukhombisa iphuzu lokuthi indlela yaseMartingale uhlelo olunobungozi obuncane, olungavumela umdlali ukuthi azuze amawini amancane ngemuva kweseshini ngayinye yokudlala.
Isu leMartingale linezinzuzo zalo, futhi lezi yizizathu zokuthi leli qhinga lidume phakathi kwabadlali abaningi abangochwepheshe. Enye yezinto ezinhle kakhulu ngaleli qhinga lokubheja ukuthi kuzoholela ekuwineni kuningi lama-roulette sessions akho. Kepha izinto ziyaphuma endleleni lapho ukubheja kuphindwe kabili.
Njengecebo, uhlelo lweMartingale lungcono uma kudlalwa amaseshini amafushane . Ngokuya ngokuhlolwa okuthile, uzowina okungenani amaphesenti angama-80 azo zonke izikhathi zakho zokudlala. Futhi amathuba okubuya ekhaya onqobayo ayanda uma udlala isikhathi esifushane. Uma udlala i-roulette eku-inthanethi isikhathi eside ngaleli qhinga, maningi amathuba okuthi uzogcina uhluliwe.
I-bankroll encane inganciphisa amathuba akho . Kufanele ube ne-bankroll ehloniphekile ukuze ukwazi ukuphinda kabili ukubheja kwakho uma kwenzeka ushaya umugqa wokulahlekelwa. Uma okungenani unama-3 noma ama-4 wokulahlekelwa imicu, lokho kuzodinga ukubhaliswa okuphezulu.
Ukuhamba okulingene kuya kokulahlekelwa okunzima kungakwehluleka . IMartingale isebenza kahle kakhulu uma i-streak elahlekile ilawulwa, ithi ukulahlekelwa okungu-3 noma okungu-4. Kepha uma lokhu kulahlekelwa kukhuphukela ku-5 noma ngaphezulu, khona-ke lolu hlelo luzolulaza i-bankroll yakho futhi luqede iphupho lakho lokushaya i-jackpot.
Ungakhuphula amathuba akho wokuwina ngokukhetha amageyimu we-roulette ozowadlala . Uma kungenzeka, khetha futhi udlale i-European Roulette ngaphezulu kwenguqulo yaseMelika. I-American Roulette ifaka zombili i-‘0 ‘ne’ 00 ‘, kuyilapho uzakwabo waseYurophu ekhombisa kuphela u-‘0’. Uhlobo lwaseYurophu lunomphetho wendlu ongu-2.7%, ongcono uma uqhathaniswa nozakwabo waseMelika.
Futhi, into enhle ngeminye yale midlalo yase-European Roulette ukuthi inikeza isici ‘sokuzinikela’ esingasetshenziswa njengenye isu lokunciphisa ukulahleka okuthile. Ngalesi sici sokudlala, ungalahlekelwa kuphela uhhafu wokubheja uma ibhola liwela ku-‘0 ‘. Lesi sici singasiza futhi ekuthuthukiseni izingqinamba zakho lapho udlala i-roulette online, ngomkhawulo wendlu olinganiselwa ku-1.35%.
Uhlelo lweMartingale lungenye yezindlela zakudala zokubheja futhi beludumile ku-18 th -khulu leminyaka eFrance
Isu leMartingale roulette isu lokubheja elikuvumela ukuthi uphinde ukubheja kwakho ngemuva kokulahlekelwa ngumdlalo
Uhlelo lweMartingale lusetshenziselwa kangcono imidlalo yesikhashana, enikeza abadlali ithuba lokuwina okungenani amaphesenti angama-80 esikhathi
Kepha kuzofika iphuzu lapho umdlali ezobhekana nomugqa wokulahlekelwa, ekugcineni adle ama-winnings amancane awatholile endleleni
Uhlelo lweMartingale luzosebenza kahle kakhulu uma une-bankroll ehloniphekile, okungcono amayunithi okubheja angama-200, uma uhlela ukwenza iyunithi elilodwa ngokubheja ngakunye
Abadlali bangasebenzisa lolu hlelo lokubheja uma bengadlala isikhathi esifushane ukugwema imigwaqo esindayo yokulahlekelwa, eyaziwa ukonakalisa ubumnandi babadlali